Hamropusta.com-Nepali Online News Portalब्यविचार गर्ने स्त्री पुरुष मा दुष्ट आत्माहरु एक शरिरबाट अर्को शरीरमा सर्छ। – Hamropusta.com-Nepali Online News Portal
ब्यविचार गर्ने स्त्री पुरुष मा दुष्ट आत्माहरु एक शरिरबाट अर्को शरीरमा सर्छ।
आज हामी सन्सारमा भएको मानिसहरूलाई नियाल्छौ भने धेरै मानिसहरू गलत यौन सम्बन्धमा लक्षित भएको देख्छौ। यौन आफैमा नराम्रो होईन तर जब गलत प्रकारले यौनलाई प्रयोग गर्छ भने यो नराम्रो हुन पुग्छ। धेरै जनालाई थाहा नहुन सक्छ गलत यौन सम्बन्धको कारण मानिसको आत्मा कहाँ जान्छ भनेर तर पबित्र शास्त्र बाइबलले हामीलाई राम्रो सङ्ग बताएको छ । हामी हेरौ।
यौन परमेस्वरले मानिस जातिलाई दिनु भएको सुन्दर उपहार नै हो जो श्रीमान् र श्रीमती बिच मात्र हुनुपर्छ । तर आज धेरै मानिसहरूले यौनको गलत प्रयोग गरेको छ । यो राम्रो हुदैहोइन। बिबाह पुर्ब नै यौन सम्बन्ध राख्नु, कुनै पनि स्त्री वा पुरुषलाई कामबासनाको रुपमा कुदृश्टिले हेर्नू, श्रीमती वा श्रीमान् साथमा हुँदा पनि अरु ब्यक्तिहरुसङ्ग यौन सम्बन्ध गर्नु।वेश्यालयमा जानू बिशेष गरि पुरुषहरु,स्त्रीहरु वेश्यावृद्धि गर्नु , बलात्कार यी आदि कुराहरु गलत यौन सम्बन्ध हुन् । बाइबलले यस्ता गलत यौन सम्बन्धलाई ब्यविचार भनेको छ ।
तपाईहरु बिश्वास गर्नुस् वा नगर्नुस् ।
जब कोहि स्त्री र पुरुष (श्रीमान् र श्रीमती बाहेक ) ब्यविचार गर्छ भने त्यसब्यक्ती भित्र दुष्ट आत्माहरु प्रवेश गर्छ।जति उसले ब्यविचार गर्छ त्यति नै दुष्ट आत्माहरु त्यस ब्यक्ति भित्र हुन्छ ।जति जति ब्यविचार गर्छ त्यति नै दुष्ट आत्माहरु थपिदै जान्छ।
मानिसहरूले कन्डम प्रयोग गरेर गलत यौन सम्बन्ध यानिकी ब्यविचार गरे पनि कन्डमले गर्ब रहन र यौन रोग हुनबाट बचाउन सक्ला !! सक्ला है मात्र तर पक्का होईन तर तपाई भित्र दुष्ट आत्माहरु प्रवेश गर्दा रोक्न र परमेस्वरको विरुद्ध पाप हुनबाट जोगाउन वा बचाउन सक्दैन ।
कसैसङ्ग ब्यविचारको लत हुन्छ किन? किनभने भने उ भित्र ब्यविचारको दुष्ट आत्मा छ ।त्यही दुष्ट आत्माले उसको मनलाई जहिले त्यही ब्यविचारको लागि उक्साउने ,ब्यविचार गर केही हुन्न कसले चाल पाउछर यस्तै यस्तै कुराहरू ल्यायर दुष्ट आत्माले ब्यविचारमा प्रेरित गरेको हुन्छ ।
त्यसैले बाइबलले भन्छ2कोरन्थि2को 11 मा सैतान अथवा दुष्ट आत्माले हामीलाई फसाउन नपाओस,किनकि त्यसका युक्तिहरुको बिषयमा तिमिहरु अन्जान नहौ।
हामी चलाख हुनुपर्छ सैतानले हामीलाई कुन कुराबाट परमेस्वर देखि टाढा बनाएको छ त्यो जान्नु पर्छ।
प्रीय हो यी गलत यौन सम्बन्धको कुराहरुले परमेस्वर धेरै दुखीत हुनुहुन्छ।
म बिशेश गरि बिस्वाशिहरुलाइ नै भन्छु।एक बिस्वाशिको शरीर पबित्र आत्माको मन्दिर हो।यश मन्दिरलाई हामीले पबित्र राख्नु पर्छ ।
जब ब्यविचारबाट यश मन्दिर हाम्रो शरीरलाई अपबित्र पार्छ भने यो शरीर पबित्र आत्माको मन्दिर हुदैन तर दुष्ट आत्माहरुको घर बन्दछ। यो दुष्ट आत्माको घरलाई बाइबलले यसरी भन्छ।
१ कोरिन्थी 3:16-17 (NNRV)
16. के तिमीहरूलाई थाहा छैन, तिमीहरू परमेश्‍वरका मन्‍दिर हौ, र परमेश्‍वरका पवित्र आत्‍मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्‍छ?
17. कसैले परमेश्‍वरको मन्‍दिरलाई नष्‍ट गर्छ भने परमेश्‍वरले त्‍यसलाई नष्‍ट गर्नुहुनेछ। किनकि परमेश्‍वरको मन्‍दिर पवित्र हुन्‍छ, र त्‍यो मन्‍दिर तिमीहरू नै हौ।
प्रीय परमेस्वरको क्रोधबाट बच्न यस्तो घिनलाग्दो काम गलत यौन सम्बन्ध ब्यविचार देखि फर्कौ।
श्रीमान् र श्रीमती बाहेक जब कोहि स्त्री र पुरुष ब्यविचार गर्छ तब त्यस स्त्री र पुरुषले पबित्र मन्दिर शरिरलाइ अपबित्र हुन्छ ।ब्यविचार गर्ने स्त्री पुरुष मा दुष्ट आत्माहरु एक शरिरबाट अर्को शरीरमा सर्छ।
परमेस्वरको बचनले भन्दछ।
1 कोरिन्थी 6:15,16,
15. तिमीहरूका शरीर ख्रीष्‍टका अङ्गहरू हुन्‌ भन्‍ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? त के म ख्रीष्‍टका अङ्गहरू लिएर तिनलाई वेश्‍याका अशुद्ध अङ्ग तुल्‍याऊँ? यो कदापि नहोस्‌!
16. वेश्‍यासँग जोडिने मानिस शरीरमा त्‍यससँग एक हुन्‍छ भन्‍ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? किनकि यस्‍तो लेखिएको छ, “ती दुवै एउटै शरीर हुनेछन्‌।”
अझै पावलले भन्दछ।
1 कोरन्थी 6:18-19 मा
18. व्‍यभिचारदेखि अलग बस। अरू जुनसुकै पाप जो मानिसले गर्दछ, त्‍यो शरीरबाट बाहिर हुन्‍छ, तर व्‍यभिचार गर्ने मानिसले आफ्‍नै शरीरको विरुद्धमा पाप गर्दछ।
19. तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्‍माको मन्‍दिर हो, जुन पवित्र आत्‍मा तिमीहरूले परमेश्‍वरबाट पाएका छौ, र उहाँ तिमीहरूभित्र वास गर्नुहुन्‍छ भन्‍ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू स्‍वयम्‌ आफ्‍नै होइनौ।
बाइबलमा हामी हेर्छौ भने योसेफ पोतिफरको श्रीमती सामुनेबाट भागेको छ।उत्पत्ती 39:13 पद।
प्रीय योसेफलाइ थाहा थियो कि मैले यस्तो गलत काम गर्नु हुदैन । त्यसैले योसेफ भागेको छ। हामी पनि यस्तो घिनलाग्दो काम ब्यविचार देखि भाग्नु पर्छ।योसेफ परमेस्वरको भयमा जिउथे।हामी पनि परमेस्वरको भयमा जिउनु पर्छ।
यदि योसेफ त्यही बसेको भए पक्कै पनि पोतिफरको श्रीमतीसङ्ग ब्यविचार हुनेथियो तर योसेफ भागेको छ रअर्को कुरा योसेफले परमेस्वरको आज्ञा मान्दथ्यो र परमेस्वरको भयमा जिउथ्यो।
आज योसेफलाइ जस्तै परिक्षा हामिहरुलाइ पनि आउन सक्छ तर हामी भाग्नु पर्छ।
मेरो प्रीय प्रभुको जनहरु यदि अझै पनि हामी यस्तै बन्धनमा छौ भने या हामी ब्यविचारमा फस्दै छौ भने केही छैन जो गल्ती भयो तर परमेस्वर भन्नुहुन्छ धार्मिक जन सात पल्ट सम्म लडे पनि उठ्ने छ।
अझै समय छ साचो पश्चताप गर्नुहोस् र परमेस्वर तर्फ फर्कनुहोस।परमेस्वर तपाइँलाई अङगालो मार्नु हुन्छ किनकी परमेस्वर दयालु र कृपालु हुनुहुन्छ ।
कहिले तपाई यस्तो घिनलाग्दो बन्धन ब्यविचारबाट फर्केर आउँछ भनी परमेस्वरले तपाईंको बाटो हेरेर बस्नु भएको छ।फर्कुनुहोस र भन्नुहोस् प्रभु येशु आज देखि यो शरीर तपाईंको मन्दिर हो । अब म कहिले यस्तो घिनलाग्दो काम ब्यविचार गर्दिन र हुन पनि दिन्न भनेर पबित्र आत्मा परमेस्वरसङ्ग प्रतिज्ञा गर्नुहोस् ।
यदि तपाईंले यो लेख पढिसक्दै गर्दा पबित्र आत्मा तपाईसङ्ग आत्मामा बोल्दै हुनुहुन्छ भने पबित्र आत्मालाइ भन्नुहोस् पबित्र आत्मा आज देखि तपाई मेरो जिबनमा बाँस बस्नुहोस ।
लेखक – पुस्पु क्रीस्चियन facebook.com/puspuchy